လူမှုရှုခင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 126
မိုးမခစာဖတ်သူတဦး (ကမာရွတ်) (မူရင်းဆောင်းပါး – ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ)ကို ဖတ်ရှုပြီး ပြန်လည်ကောက်နုတ်ကိုးကား ရေးသားသည်) မေ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (ကိုးသောင်းဘုရား၊ မြောက်ဦး၊ ဓာတ်ပုံ – အင်တာနက်) (ထုပ်ခံသိမ်၊ မြောက်ဦး၊ ဓာတ်ပုံ – အင်တာနက်) ၂၀၁၂ မေလ ၃ ရက်နေ့ က Global Heritage Fund ( ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ) က အာရှတိုက်ထဲမှာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ဆယ်ခုဟာ ပျက်စီးပျောက်ကွယ်ရမယ့် ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီဆယ်ခုထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ ရှေ့ ဟောင်းမြို့ တော် မြောက်ဦးမြို့ တော်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်ငံတော်ပိုင် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ အဲဒီကြေငြာချက်ကို...
ပြည်တွင်းက Sky Net Myanmar ကို ပြည်ပမှာ အင်တာနက်ကနေ ကြည့်ဖို့ – weblink
မုိုးမခပေးစာ၊ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ဒီလင့်ကနေ (http://mhuthaw.blogspot.com/2012/04/sky-net-myanmar-online-channel.html) ကောက်နုတ်ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။ ” xxx xxx xxx အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ကြည့်ရှူနိုင်ဖို့ ဒီလင့်လေးကို ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ မသိသေးသောသူများအတွက်ပါ။ ဒီလိုင်းက တိုက်ရိုက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး နာရီအနည်းငယ်နောက်ကျပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ သင်္ကြန်အလွမ်းပြေ နေ့တိုင်း Skynet ကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်လိုပဲ အတာသင်္ကြန်ကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့အတွက်ပါ။ အရင်ဆုံး ဒီလင့် လေးကိုသွားပြီး ဒေါင်းလော့ချပါ။ ပြီးရင် run ပါ။ run ပီးတဲ့အခါမှာ Search channel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ 99221 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကြည့်လို့ရပါပြီ။ နက်ကောင်းရင် ကောင်းသလောက် ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီ Channel လေးက နေ့တိုင်းထုတ်လွင့်ပေးပါတယ်။ သတင်းတွေကိုလည်း ကြေငြာပေးပါတယ်။ xxx “ No tags for this post....
ကိုသင့်မြတ် မေ ၈၊ ၂၀၁၂ ပြောရရင်တော့ ဒီအကြောင်းကို မပြောချင် မရေးချင်ဘူးဗျ။ သူတပါးစီးပွားရေးကို တုတ်နဲ့ ထိုးသလို (အဲ) ကလောင်နဲ့ထိုးသလို ဖြစ်နေ တာကိုး။ ဘယ်သူများ ပြောမလဲ ရေးမလဲဆိုပြီး စောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီ။ သူတပါး ထိခိုက်တာထက် သူအများ ထိခိုက်နေတာကို အမြင်မ တော်လွန်းလို့သာ ရေးလိုက်ရတာ..။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ။ ကိုယ်လူတို့ ရောက်ဖူးမလားတော့ မသိဘူး။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်။ နာမည်ကျော် သောင်ရင်းမြစ်လေ။ မြစ်ဆိုပေမယ့် တိမ်ကောတာတွေများ လေတော့ ချောင်းသာသာ မြောင်းသာသာရယ်ပါ။ နို့ပေမယ့် ထိုင်း – မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အဓိကအကျဆုံး အရေးအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်မှုနေရာကြီးကိုဗျ။ (ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးက ကြံ့ခိုင်မှုသိပ်မရှိတော့လို့ဆိုလား လူနဲ့ လူစီးကားတွေလောက် သာ ဖြတ်သန်းတာ)...
မေ ၇၊ ၂၀၁၂ မိတ္ထီလာမြို့ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက်နေ့ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ရက်) ……………………… လူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့စွာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေသော ကောင်းကင်ကုမ္ပဏီ မိတ္ထီလာ၊ မလှိုင်၊ ၀မ်းတွင်း ဆုံ (၃) ဆုံဒေသအတွင်းရှိ (၃၈ ၁၊ ၃၈၂) ကွင်းအမှတ်ရှိ မြေ (၂၆၈) ဧကကို အစိုးရအဖွဲ့၏လုပ်ကိုင်ခွင့်အာဏာကိုရရှိထားသော ကောင်းကင်ကုမ္ပဏီ (ဦးခင်မောင်ဌေး + ဒေါ်ခင်မာကြူ) မှ အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာမြေကိုအမှီပြု၍ နိုင်ငံ၏စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုမရှိစေရန်အတွက် စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း ၊ နေကြာစိုက်ပျိုးနေသော တောင်သူလယ်သမားများမှာ လယ်မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့ဘ၀ကိုရောက်ရှိနေရပါသည်။ ဒေသခံတောင်သူများမှ မန္တလေးဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်...
ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဇာဂရရဲ့ မှတ်တန်းဓာတ်ပုံများ မိုးမခစာဖတ်သူ (၂၀၁၁)၊ မေ ၆၊ ၂၀၁၂ ဆရာတော်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို တင်ဆက်ပေးလို့ ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေးဆရာတော် ရဲ့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ မရှိဘူးဆိုလို့ ဆရာတော်ရဲ့ အရေးတော်ပုံကာလမှတ်တမ်းပုံများ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော်တို့ထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခပေးစာ မေ ၆၊ ၂၀၁၂ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ မဟာဆွေလမ်းမကြီးအနောက်ဘက်ခြမ်းနှင့် လမ်းသွယ်များတွင် စက်ရုံများမှ ဓာတု ဗေဒဆေးများပါဝင်သည့် အမည်းရောင်စွန့်ပစ်ရေဆိုးရေညစ်များကြောင့် နွေရောမိုးပါရေ၀ပ်နေသဖြင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ၏ ကျန်းမာ ရေးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်လျက်ရှိပြီး၊ ယင်းဓာတုစွန့်ပစ်ရေ၏ အငွေ့များကြောင့် နေအိမ်သွပ်မိုးများပျက်စီးလွယ်ခြင်း၊ အီလက်ထရွးန်းနစ်ပစ္စည်း များ ပျက်စီးလွယ်ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ရပ်ကွက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံမှ (၂၄) နာရီမပြတ်စွန့်ထုတ်သော ဓာတုရေဆိုးများ၊သီရိမြိုင်လမ်းမကြီးနှင့် အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်းထောင့်ရှိ ရေသန့်စက်ရုံမှ စွန့်ထုတ်သောရေဆိုးများကို ပိတောက်ချောင်းအတွင်းသို့ စနစ်တကျစွန့်ထုတ်မှုမရှိ ခြင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်း စနစ်ကျသောရေထုတ်ရေနုတ်မြောင်းများမရှိခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းများခင်းထားသောကြောင့် ရေထွက်ပေါက်များပိတ် ဆို့သွားခြင်း စသည်အကြောင်းတို့ကြောင့် စွန့်ပစ်ရေဆိုးများသည် အနိမ့်ပိုင်းလမ်းသွယ်များအတွင်းသို့ ပျံ့နှံ့ဝင်ရောက်ပြီး ဆယ်နှစ်ရာသီရေ ၀ပ်သည့်အပြင် လမ်းမအနိမ့်ပိုင်းနေရာအချို့ကိုပါ ရေလွှမ်းမိုးလျက်ရှိနေပါသည်။ ရပ်ကွက်ပြည်သူများသည် နေအိမ်များအောက်တွင် အမြဲဝပ်နေသောရေဆိုးများ၏ ဓာတုဆေးအနံ့ဆိုးများကို...
မေ ၃၊ ၂၀၁၂ …………….. သို့ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ။ အကြောင်းအရာ။ ။ မြေကွက်များရိုက်ပြီး မြေကြီးများဖို့နေခြင်းအား ကန့်ကွက်ခြင်း။ အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းရှိ် ၀န်ထမ်းကြီးများရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာ ကွေ့အနီး၊ အမှတ် (၄) လမ်းမကြီးနှင့် မြို့ပတ်လမ်းအကြားတွင်ရှိသော မြေကွက်လပ်အပေါ်တွင် အကွက်များရိုက်၍ မြေကြီးများဖို့နေကြ ပါသည်။ အမှတ် (၄) အဝေးပြေးလမ်းသည် ယခုအခါ (၂) လမ်းသွားအဆင့်သာတည်ရှိနေပါသည်။ နေ့စဉ်ကုန်တင်ကားကြီးများ၊ သစ်လုံးတင်ကား ကြီးများ၊ ရွှေပြည်သာမြို့အတွင်းမှ လိုင်းကားများ၊ လှော်ကားမှလိုင်းကားများ၊ ကွန်ပြူတာကျောင်းကြိုပို့ကားများ၊ မှော်ဘီကျောင်းကြိုပို့ ကားများ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားများ နေ့စဉ်အသုံး ပြုနေရသောလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် မကြာခဏ လမ်းပိတ်ဆို့နေခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေပါသဖြင့် နောင်တချိန်တွင် လမ်းတိုးချဲ့ရန် မလွဲမသွေလို အပ်သောလမ်းမကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ အမှတ် (၄)...
MoeMaKa Reader – ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သာသိရင် ၀မ်းသာရှာမယ်
ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သာသိရင် ၀မ်းသာရှာမယ် မိုးမခစာဖတ်သူတဦး (မြက်ခင်းစိမ်း)။ မေ ၃၊ ၂၀၁၂ မနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်ဒီအမတ်များ ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြတ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ရောက်သွားပြီ။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပဏာမအားဖြင့် လက်ခံပြီး လွှတ်တော်တွင်းမှာ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ရေး၊ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်တော့မယ့် လမ်းကို စတင် လျှောက်လမ်းလိုက်ပြီ။ ဒီမြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ ၂၀၁၂ နှစ်သစ်ကူးမှာ အကြွေစောခဲ့ရှာတဲ့ မြန်မာအီးဂရက်စ် ထူထောင်သူ၊ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သာ သက်ရှိထင်ရှားသာ ရှိနေသေးရင် သူမျှော်မှန်းခဲ့သလို အိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းသားအားရဖြစ်ရှာမယ်လို့ တွေးနေမိတယ်ဗျာ။ အခု မိုးမခက အမြင်ချင်း မတူသူတွေ၊ အခြားတဖက်က တွေးသူတွေ၊ ခင်ဗျားတို့တတွေ ပြန်ကြည့်ချင်ကြည့်ဖို့ ဆိုပြီး ကိုနေ၀င်းမောင်ရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ဟောပြောခဲ့တဲ့...
အင်ဂွန်ဂျာဝါ မေ ၃၊ ၂၀၁၂ ကချင်ပြည်နယ်သည် စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပီ။ ကချင်လူမျိုးစု KIA အမာခံနယ် ရွှေဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေနံပိုက်လိုင်းဖြက်သန်းသည့်နေရာကို စစ်တပ် က တရားမျှတ၊ လေးစားစွာ ညှိနှိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး ဖြေရှင်းရမည့်အစား၊ အခြေနေအကျပ်အတည်းကို လက်နက်အင်အားဖြင့် ဖန်တီး နေပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရတနာဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက်လည်း ကရင်လူမျိုးစု KNU လက်နက်ကိုင်များကို အင်အားသုံးပြီး ထိုင်းနိုင် ငံလစ်လျူရှုမှုဖြင့် မာနယ်ပလောတိုက်ပွဲ တဖက်သတ်အနိုင်ယူ၊ ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်ကို KIA များက ကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူလျှက်ရှိပါ သည်။ ကချင် KIA ဌာနချုပ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်မှ နာရီဝက်အတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်သောအခြေအနေရှိနေသောကြောင့် စစ်ဌာနချုပ် အရေးပါသူများ တောတွင်းဝင်သွားသည်မှာကြာလေပြီ။ အင်အားကြီးမားလှသော မြန်မာစစ်တပ်ကြီးနှင့် တိုက်ပွဲကြီးလုံးဝရှောင်ရှား ရပါ သည်။ လူထုထောက်ခံသော ပျောက်ကြားစစ်ကို ဆင်နွှဲလျှက်ရှိပါသည်။ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင်...
Pho Thee Cho – ထားဝယ်က ဖိုးသီးချို ကိုယ်ပိုင်မီးအားပေးလုပ်ငန်းကို စားသုံးသူတို့ မီတာခလျော့ရန် တောင်းဆိုမည်
မိုးမခပေးစာကဏ္ဍ၊ မေ ၁၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရှိသော ပေးစာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ “ထားဝယ်မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသော ဖိုးသီးချိုကုမ္မဏီမှ မီတာခကောက်ခံရတွင် မတရားမှုများ ရှိနေသဖြင့် ထားဝယ်သူ ထားဝယ်သားများ မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ မီတာခလျှော့ချပေးဖို့ တောင်းဆိုရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည် ။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ဖိုးသီချိုမှ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ကောက်ခံသော မီတာခအား ၁၀ ယူနစ်အောက်သုံးစွဲသူများအတွက် အစိုးရနှုန်းအတိုင်း တစ်ယူနစ် ၅၀ ကျပ်အထိ လျှော့ချပေးလိုက်သော်လည်း ထားဝယ်မြို့တွင်မူ တစ်ယူနစ်ကို ၅၀၀ ကျော် ၆၀၀ နီးပါအထိ ကောက်ခံလျက် ရှိသောကြောင့် ဒေသခံအများစုမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။” (ဆက်သွယ်ရန် – ကို ဇော်ဝင်း (၀၉ ၄၉၈၅၂၃၁၄)၊ ကို ဌေးဦး (၀၉ ၄၉၈၅၁၃၃၃)၊ ဖိုးသီးချို (၀၅၉...
Page 126 of 130«1...124125126127128...130»
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-၂၀၁၄) ကွယ်လွန်ခြင်း တလပြည့်ဆွမ်းကျွေး အထိမ်းအမှတ် (LA) (မေ ၁၇၊ စနေ)